မေးကြ ဖြေကြပုံဆန်း – JQY's Blog
ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ အနိစ္စဆိုတာရှိပါတယ်။ အမြဲမရှိပေ့ါ။ အမြဲမရှိဆိုရာမှာ စိတ် , စေတသိတ်, ရုပ်တွေဟာ အမြဲမရှိဘူးလို့ ဆိုလိုတာ လို့ထင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် သညာ ဆိုတဲ့ စေတသိတ်ဟာလည်း အမြဲမရှိဘူးပေါ့။ မှတ်သားတတ်တဲ့ သညာဟာ အမြဲ မရှိဘူးဆိုရင် ဘာဖြစ်လို့ ကျွန်မတို့ဟာ တစ်ခုခုကို မှတ်သားထားရင် မှတ်မိနေပါသလဲ။ တကယ်တမ်း အနိစ္စတရားအရ မှတ်သားထားတာတွေ မမြဲဘူးဆိုတော့ ပျက်သွားရမှာ မဟုတ်ဘူးလား။
ဟုတ်ကဲ့…. ဒါမျိုးက ဗုဒ္ဓစာပေကို တစ်စွန်းတစ်စဖတ်မိသူတွေ ဖြစ်တတ်တဲ့ ရောဂါပါ…
ဒီလိုပါ။ ဗုဒ္ဓက ပဋ္ဌာန်း ၂၄ ပစ္စည်းကိုဟောထားတယ်။ ကြားဖူးချင် ကြားဖူးမယ်။ ကြားဖူးသော်လည်း သိချင်မှသိမယ်။ အဲဒီထဲမှာ ဟေတုပစ္စယောကက စလို့ ဆက်သွားလိုက်ရင်…. အနန္တရပစ္စယော နဲ့ ဥပနိဿယ ပစ္စယော ဆိုတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အနန္တရပစ္စယောဆိုတာ ဖြစ်ပြီး မှတ်ပြီးနောက်ပိုင်းကြာမှ သို့မဟုတ် ဒီတစ်ခု ဖြစ်ပျက်ပြီးမှ နောက်တစ်ခုကို အရင်အတိုင်းဖြစ်ခွင့်ပေးတာမျိုးကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပနိဿယပစ္စယောကတော့ ရှေ့က အကြောင်းကို မှီပြီးမှ နောက်က အကျိုးတွေ ဖြစ်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။